Socdaalayaasha Ingiriiska ayaa ka digay: Ka jawaab albaabkaaga markay dowladdu timaado garaacista
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Socdaalayaasha Ingiriiska ayaa ka digay: Ka jawaab albaabkaaga markay dowladdu timaado garaacista
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Caafimaadka Warka • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Safaradii Ingiriiska ayaa ka digay
Xoghayaha arrimaha gudaha Priti Patel ayaa xoojisay adeegga u hogaansanaanta dadka safarka ah ee ku laabanaya dalkooda, sidaa darteed socdaalayaasha Ingiriiska waxay uga digeen inay ka jawaabaan albaabadooda.
Xoghayaha Arimaha Gudaha ee Ingiriiska wuxuu ku wargaliyay inay jiri doonaan 70,000 oo jeeg todobaadle ah dadka Britishka ah ee ka soo laabanaya safarka.
Waxaa loo gudbiyay baarlamaanka in ugu yaraan boqolkiiba 75 dadka safarka ah ee soo laabanaya ee looga baahan yahay inay karantiil ku noqdaan guryaha aan la hubin.
Kuwa dibada ka jooga markay ahayd inay ku jiraan - karantiil taasi waa - ganaaxa wuxuu gaari karaa ugu badnaan 10,000 rodol.
Priti Patel, Xoghayaha Arimaha Gudaha ee Ingiriiska, ayaa ku dhawaaqday in dadka Britishka ah ee ka soo laabanaya booqashooyinka ay ku tagayaan dalal "amber" ay wajihi doonaan booqasho uga timaada Adeegga Xaqiijinta iyo U hogaansanaanta (IACS) si ay u hubiyaan in ay ilaalinayaan karantiil guriga ku saleysan oo 10 maalmood ah oo sharcigu farayo.
Waxay sheegtay in ay jiri doonaan 70,000 jeeg toddobaadle ah oo lagu ganaaxi doono ilaa 10,000 rodol dadka ka baxsan goorta ay tahay inay galaan.
IACS ayaa dib loo habeeyay kadib markii ay soo sheegeen baarlamaanka baarlamaanka in ugu yaraan 75 boqolkiiba dadka safarka ku soo noqonaya ee looga baahan yahay inay karantiil ku noqdaan guryaha aan dhab ahaan la hubin. Xisbiga mucaaradka ee Labour ayaa sheegay in dadka Britishka ah ay "gabi ahaanba la soo dersayaan viruska" wax qabad la'aanta dowladda iyo karti darrida. Sida ku xusan xayeysiisyada banaan ee shaqada UK, celceliska mushaarka sanadlaha ah ee kormeerayaasha IACS waa kudhowaad 20,000 rodol. Booliiska waxaa looga yeeri doonaa oo kaliya albaabada guriga hadii kormeerayaashu aysan awoodin inay la qabsadaan.